Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao Mafana Thailand » Ny onja fahatelo izay nanimba ny drafitra fanombohan'ny fizahan-tany any Thailandy - aiza isika izao? » Page 2
Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovaom-panjakana • Vaovao momba ny fahasalamana • Hospitality Industry • Vaovao • fanorenana • tompon'andraikitra • Safety • Vaovao Mafana Thailand • Tourism • Dinika fizahan-tany • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Tsiambaratelo momba ny dia • Travel Wire News • malaza ankehitriny • Vaovao isan-karazany
Nandritra ny fitsidihako farany tao Hua Hin, ny morontsiraka banga dia tena porofo efa nisy sahady tamin'ny onja fahatelo nitarika fanafoanana be dia be. Ny toeram-pialan-tsasatra sasany, 70-80 isan-jato no nipetraka teo aloha, no nahita fa maty ny olona tonga teto an-toerana. Efa naratra noho ny tsy fahampian'ny mpitsidika iraisam-pirenena, ity valan'aretina farany ity dia vahiny tsy ankasitrahana indrindra.
Ny resaka fanokafana indray an'i Thailand ho an'ny fizahan-tany, manomboka amin'i Phuket, dia mazava ho azy fa nandondona tany aoriana. Ny fizahan-tany momba ny fizahan-tany sy ny fanatanjahantena dia nilaza fa, "Ny tena zava-dehibe dia ny vakisiny tsy ampy, miahiahy ny amin'ny fisokafan'ny vanim-potoana izahay. Mbola mila mifanakalo hevitra momba ny drafitry ny fitantanana vaksinina isika. Raha tsy tratra ny tanjon'ny fiarovana ny omby dia mety tsy maintsy hodinihintsika ny manokatra faritra sasany ao Phuket fotsiny, "hoy izy.
Na izany aza, ny fanohizana io drafitra io ihany, na dia misy faritra voafetra aza, dia tsy ho mora raha mbola mitombo ny aretina isan'andro isan'andro, hoy ny minisitra Pipat.
"Ny tena zava-dehibe dia mbola mila maheno amin'ny firenen-kafa isika fa efa nanomboka fifampiraharahana momba ny fahatokisan-tena momba ny fahatokisan-dry zareo momba ny fizotra iray ihany," hoy izy.
Toa an'i Hua Hin, ireo trano fandraisam-bahiny any Avaratra dia nitatitra ny fanafoanana maherin'ny 70 isan-jato miaraka amin'i Chiang Mai izay antony iray ahiana ary miaina tranga mitombo coronavirus. Talohan'ny areti-mandringana dia toerana be mpitia ity faritany ity hankalazana ny Taom-baovao Thai.
Mampalahelo ny minisitra Pipat fa amin'ny quarantine aorian'ny nifandraisany akaiky tamin'ny minisitry ny fitaterana Saksayam Chidchob, izay voamarina fa voan'ny Covid-19. Soa ihany i Minster fa efa nahazo ny jab fanaovana vaksiny voalohany tamin'ny volana lasa teo (AstraZeneca) ary hijanona mitokana mandra-pahatongan'ny herinandro manaraka rehefa vita ny fitsapana rehetra (fitsapana swab 3).